एक Jackpot माथि इच्छा | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! एक Jackpot माथि इच्छा | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
दन्तिये वरिपरि प्रसिद्ध कहानी-THEMED स्लट को एक नम्बर एक लोकप्रिय स्लट खेल विषयवस्तुहरू छन्. यी स्लट को सबैभन्दा एकल कहानी आधारित छन् तर के भने सबैभन्दा लोकप्रिय fairytales सबै तत्व लिन्छ र एक मा उनलाई जोडती एक स्लट खेल हो? खैर, यहाँ यो खाका खेल द्वारा एक Jackpot स्लट माथि को इच्छा छ. यस बारेमा थप जान्न, पढ्न.
एक Jackpot एक छ माथि इच्छा5रील,3पङ्क्तिहरू, र 20 paylines स्लट खेल. तपाईंले प्रति स्पिन 20p रूपमा कम शर्त गर्न सक्छन् र यो खेल मा उच्च 200 रूपमा प्रति स्पिन £. तपाईं कुनै पनि अन्य स्लट खेल मा के हुनेछ जस्तै गर्न पहिलो आफ्नो शर्त सेट तपाईं यो खेल खेल्न सुरु गर्न. भनेर लागि, तपाईं के गर्न आवश्यक सबै माथि वा तल स्क्रिनको तल मा कुल बेट ट्याबमा तीर आफ्नो वांछित शर्त सेट गरिएको छ सम्म प्रेस छ. त्यसपछि तपाईं बायाँ गरेका सबै स्पिन बटन मारा छ.
खेल जो एकदम धेरै यसैले तपाईं ठ्याक्कै आधार खेल समयमा बारम्बार पेआउट आशा गर्न सक्दैन तिर्न बोनस सुविधाहरू धेरै छ. त्यसैले खेल एक अस्थिर छ, तर यो पनि बोनस सुविधाहरूमा बर्खास्त नगरेसम्म वरिपरि प्रतीक्षा गर्न धैर्य गर्नेहरूलाई खेलाडीहरू इनाम दिनुहुन्छ. त्यसैले, यो खेल खेल्न गर्दा रोगी हुन राम्रो छ.
Cinderella जुत्ता, एक महल, जबकि तल्लो मूल्य प्रतीक परम्परागत कार्ड प्रतीक हो सुनको वीणा आदि बनेको खेलको उच्च मूल्य प्रतीक. खेल पनि बोनस प्रतीक एक जोडी छ. तिनीहरूले भ्यागुतो प्रतीक हो, जो जंगली र पुस्तक प्रतीक हो, जो स्क्याटर छ.
यो स्क्याटर प्रतीक को कहानी बोनस लागि एक ट्रिगर रूपमा कार्य. भनेर लागि, तपाईं भूमि छ3को रील मा यो प्रतीक को 1,3 र 5. त्यसपछि तपाईं निम्न बोनस दौर को एक बीच चयन गर्न आग्रह गरिने.
Rumpelstiltskin सम्झौता निर्माता – यहाँ तपाईं धेरै सम्झौताहरू प्रस्ताव र एक छनोट गर्न आग्रह गर्दै. तपाईं सम्म अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ5यो मिनी खेल मा सम्झौता.
रेपन्जेल फ्री Spins – एक मुक्त spins एक राजकुमार संग दौर रील मा 5. उहाँले टावर चढती, यसो गरेर आफ्नो गुणक वृद्धि.
तीन साना सुँगुर फ्री Spins – यहाँ तपाईँले सुँगुर wilds निःशुल्क spins एक सेट नम्बर दिइएको छ.
ज्याक र Beanstalk – को beanstalk बढ्न बनाउन सिमी छान्नुहोस्. सुनको हांस अन्डा फेला पार्न शीर्ष पुग्न.
सबै मिनी खेल रोमाञ्चक र ठूलो पुरस्कार प्रदान, यसैले यो तिनीहरूलाई बीच चयन गर्न गाह्रो छ. त्यसैले, कि शुभकामना!!
प्रतीक्षा, यो खेल छ, अझ बढी, यस परी धर्म माता बोनस संग बोनस सुविधाहरू मामलामा प्रस्ताव. यो जहाँ तपाईं बीच चयन गर्न आग्रह गर्दै अनियमित सुविधा छ3बोनस खेल प्राप्त गर्न orbs.
बोनस खेल Pinocchio र प्रस्ताव wilds जस्तै दन्तिये आधारित छन्, मुक्त spins र कहानी बोनस आदि मा प्रविष्टि.
तापनि तपाईं सबै अनलाइन क्यासिनो scour, यो एक Jackpot माथि इच्छा भन्दा बढी सुविधा धनी छ कि एक स्लट खेल पाउन गाह्रो हुनेछ. तपाईं सबै बस जब तपाईं खेल सोच सुरु दिइएको छ यसलाई प्रस्ताव छ, यो तपाईं पनि अधिक दिन्छ. यो निश्चित एक स्पिन लायक छ कि एक स्लट छ.